FIZARANA 12: Fr. Michel Rodrigue - Taorian'ny Ady sy ny Ady lehibe III - Fanisana ny fanjakana
Fizarana 12 amin'ny "famerenana amin'ny laoniny" miaraka amin'i FR. RICHRIGUE MICHEL
Teny avy amin'ny Fr. Michel Rodrigue	:
Nilaza tamiko ny Ray fa ny taonjato faha-roapolo dia taonjato. Aorian'ny fampitandremana dia tsy misy olona avela eto ambonin'ny tany afaka hilaza fa tsy misy Andriamanitra. Rehefa tonga ny fampitandremana dia hahafantatra an'i Kristy ny olona rehetra, ary hahafantatra ny vatany ihany koa, ary ny vatan'i Kristy dia Fiangonana Katolika. Ho fantatr'izy ireo fa tsy maintsy miverina Aminy amin'ny fomba hanehoanao azy ireo izy. Ho eo ihany koa ny pretra hitsena azy ireo. Tsy ho eo isika hitsara azy ireo. Amin'izay fotoana izay, ny olona rehetra izay miditra ao am-piangonana dia maniry ny hanompo ny Tompo. Afaka miverina ao am-piangonana ny olon-drehetra miaraka amin'ity fotoana ity izay nofidinin'ny Ray, Izy tenany. Ho ao isika hanompo ny Tompo.
Aorian'ny fahazavan'ilay feon'ny fieritreretana, ny zanak'olombelona dia homena fanomezana tsy manam-paharoa: vanim-potoana fibebahana maharitra enim-bolana sy sasany herinandro izay tsy hananan'ny devoly fahefana haneho. Midika izany fa ny olombelona rehetra dia hanana safidy malalaka tanteraka handray fanapahan-kevitra ho an'ny Tompo. Tsy hamatotra ny sitrapontsika ny devoly ary hiady amintsika. Herinandro roa sy tapany voalohany, indrindra indrindra, dia ho tena manan-danja tokoa, satria tsy hiverina ny devoly amin'izay fotoana izay, fa ny fahazarana ataontsika, ary ho sahirana ny olona hiova. Ary izay rehetra nandray ny faniriana ho azy, ny fahatsapana fa ilainy ny famonjena azy dia ho marika eo an-handriny ny lakroa hazavana iray izay asehon'ny anjelin'ny mpiambina azy.
Nefa tiako ny milaza aminao, ny mahatoky rehetra sy ny olona rehetra an'ny mpanompon'ny Tompo dia efa voamarika sahady. Tao Rochester, New York aho, ary nanao fivoriam-bavaka izahay tao amin'ny valo amby roapolo. Tao an-dakozia izahay, ary raha niandrandra ny masoko dia nahita izay rehetra voamarina tamin'ny hazo fijaliana aho. Gaga be aho. Nisy lehilahy iray nanana lakroa voafaritra niaraka tamin'ny sampana telo, izay midika fa rehefa tonga ny andro dia ho jeneralin'ny tafiky ny Tompo izy. Efa vonona amin'izany izy. Isika dia manana jeneraly iray isaky ny firenena. Fantatro izany. Nifidy ny Tompo izy ireo. Mahagaga.
Tsy nomen'Andriamanitra lalana telo izahay, fa ny roa ihany. Tsy misy farantsakely eo anelanelan'ny lalan'ny faharatsiana sy ny lalan'ny Tompo. Izay hilaza hoe: Tsy fantatro. Tsy afaka mandray fanapahan-kevitra aho, ”dia tsy hitoetra tsy hiraharaha. Araka ny lazain'Andriamanitra ao amin'ny Bokin'ny Apokalipsy (3:16):
"Koa satria mafana ianao, na mafana na mangatsiaka, dia efa haloako ianao amin'ny vavako."
Tsy maintsy manao fanapahan-kevitra hentitra ny olona, ​​ary ho azonao ny antony, satria aorian'izany dia avela miaraka amin'ny vokatry ny fanapahan-keviny izy ireo. Hifarana ny fotoan'ny famindram-po ary hanomboka ny fotoan'ny fahamarinana. Nilaza izany tamin'i Md Faustina Kowalska i Jesosy hoe:
Soraty ity. Alohan'ny hahatongavako ho mpitsara marina. Hiverina aloha aho amin'ny maha-Tompon'ny famindrampo. Alohan'ny hahatongavan'ny andro fitsarana, dia hisy famantarana any an-danitra amin'ny fomba toy izany. Ny fahazavana rehetra any an-danitra dia hovonoina, ary hisy haizina lehibe ambonin'ny tany rehetra. Avy eo dia ho hita eny amin'ny lanitra ny famantarana ny hazo fijaliana ary avy eo amin'ny fantsom-pifandraisana izay nofantsihana ny tanana sy ny tongotra, izay hanazava ny Tany mandritra ny fotoana maharitra. Ho avy tsy ho ela ity andro farany ity.
Hisy famantarana mahagaga izay omena an'izao tontolo izao aorian'ny fotoana fampitandremana. Ho any Garabandal, Espaina ny kesy izay nivoahany voalohany tany. Mandritra izany fotoana izany dia ho hita eo Medjugorje, izay efa nampanantenaina ihany koa. [Nilaza i Luz de Maria fa hitranga amin'ny tendrombohitra Tepeyac izay nisehoan'ny Our Lady of Guadalupe tany Mexico City.] Ho hita eo ny fahitana ary haverina amin'ny fahitalavitra. Ity dia hitranga amin'ny fanombohan'ny Fahoriana.
Ho anareo Katolika mahatoky, hoy ny Ray tamiko, "Manavao ny fanamasinana anao amin'ny Fila Masin'i Jesosy sy i Maria." Zava-dehibe izany. Fantatrao fa efa voatahy sahady ianao satria efa lasa fantatra. Nahoana araka ny eritreritrao no nofidin'Andriamanitra ho eto ianao [na vakiana]? Satria manana iraka ampanaovinao ianao. Rehefa mivoaka ianao, rehefa miverina any an-tranonao [na mametraka ity boky ity], dia hahatsapa zavatra amin'ny soroka ianao. Inona ity? Ny enta-mavesatr'i Jesosy, izay iraka an'ny Tompo. Raha mampahafantatra anao anao izao ny amin'izay hitranga izy, dia satria ny olona dia hiverina avy amin'ny traikefa mistery hihaona amin'Andriamanitra, mitady fanampiana, tsy hahalala izay tokony hatao. Ny sasany hatahotra. Ho tafintohina ny hafa.
Nosafidiana ianao anio hanampiana amin'ny fitarihana ireo olona ireo ao amin'ny Eglizy Katolika handray ny Vaovao Mahafaly an'i Jesosy. Afaka tanora na antitra ianao. Aza manahy raha manana olana amin'ny tongotrao, ny lamosinao. Betsaka ny lamosina any an-danitra, ary ny Tompo dia afaka manavao anao tsara lavitra noho ny mpitsabo rehetra. Ny sasany aminareo dia hanome toromarika katechetical fohy ho an'ireo izay tsy mahalala na inona na inona zava-dehibe amin'ny finoana katolika.
Koa antsoina daholo isika rehetra, vonona hanampy ny rahalahintsika sy ny rahavavintsika rehefa tonga io vanim-potoana enina sy tapany io, vonona ny hitari-dalana azy ireo ho any am-piangonana, izay hahitany ny fiadanan'ny fony, ny hafalian'izy ireo miaraka amin'ny Tompo. Nantsoina ho mpianatr'i Kristy rehetra isika rehetra. Tsy maintsy miresaka ianao, tsy maintsy mijoro, mila manoro hevitra ianao. Eny.
Voalohany indrindra dia mila mihavana amin’Andriamanitra ny olona, ​​ka hoentinny mpisorona ho anny fitanisana azy izy ireo. Manome toky anao aho fa ny pretra izay tsy ao anatin'ny fahasoavana dia hanana fotoan-tsarotra satria mbola hisy toerana lavitra ho fiaiken-keloka — hitako ny tsipika! Mila fiarovana sy fanampiana izy ireo. Miangavy anao amboary ny sandwich ny pretra! Manome toky anao aho fa raha tsy manakana ny tsipika ny olona dia tsy afaka mankany amin'ny efitra fandroana izahay! Tsarovy ny Cure D'Ars, Masindahy John Vianney, izay tao amin'ny fieken-keloka nandritra ny efatra ambin'ny folo ora indraindray.
Raha tsy vita batisa ny olona, ​​dia hitondra azy ireo hiomanana amin'ny batisa ianao, izay hitranga haingana satria ho fohy ny fotoana. Hanao batisa amin'ny masobe isika, tahaka ny nataon'ireo Apôstôly, tamin'ny namafy rano tamin'ny vahoaka ary nanao fanambarana hoe: "Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina." Manome toky anao aho fa nahita izany koa. Ny sasany dia niresaka an'izany fotoana izany, nefa tsy tokony ho tompon'andraikitra afa-tsy amin'ny fizarana izay nambaran'ny Ray tamiko fotsiny aho. Tsy maintsy mamaly an'Andriamanitra aho rehefa maty aho, koa izany no iriko hahatokisana azy.
Rehefa miverina isaky ny enina sy tapany herinandro ny devoly dia hamoaka hafatra ho an'izao tontolo izao izy amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao, finday, tele, TV, et cetera. Ny hafatra dia izao: Fampisehoana iraisana no nitranga tamin'ny daty. Nanadihady izany ny mpahay siansa ary nahita izany fa nisy andian-jiro avy amin'ny masoandro nivoaka avy tao amin'izao rehetra izao. Nihahery tokoa izy io ka nisy fiantraikany teo an-tsain'ireo olona teto an-tany, ka nomen'ny saina iray ihany izany.
Ny devoly dia mamitaka antsika na dia amin'ny alàlan'ireo pretra vaovao eran'izao tontolo izao aza: ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra izay maniry anao hieritreritra izay zavatra eritreretiny, ka ny vaovao ihany no atorony. Izy ireo dia mamadika ny fahamarinana ary ianao hypnotised, nosedraina hino azy ireo.
Hizara zavatra izay mety hahagaga anao aho. Nandritra ny ady lehibe faharoa, ny Nazia dia voafidy sy voaofana ho amin'ny andraikitra manokana. I Hitler dia nivavaka tamin'i satana, ary ireo SS no nivarotra azy, noho izany ny fananan'ny Nazia. Tsy nahalala an'izany ny tafika alemà, fa satria teo ambany fahefan'ny SS izy ireo dia nanaraka baiko. Raha tsy izany dia novonoina izy ireo.
Izany koa no hitranga ankehitriny. Misy ny Didy Eran-tany iray izay ahitana ny olona milaza ny tenany ho Illuminati sy mivavaka amin'i Satana. Manana saribakoly izy ireo amin'izao fotoana izao, amin'ny firenena tsirairay, izay noteren'izy ireo hanompo an'i Satana miaraka amin'izy ireo. Ny sandrin'izy ireo faharoa dia ireo filoham-pirenena iraisan'ny banky iraisam-pirenena, izay manapa-kevitra hoe iza no volan'ny firenena ho tombanana, hiteraka resa-bola ary izay vola handroso. Tsy fanapahan-kevitra ao amin'ny firenena iray izany fa any ivelan'ny firenena. Ny sandriny fahatelo an'ny Illuminati dia ireo kambana lehibe telo an'ny satanika mahery eto an-tany: ny fivavian'i Egypt; ny kolotsaina any Eropa, sy ny kolotsaina wicca, izay any Etazonia. Ny vondrona izay miasa eo ambany ny lalany dia ny Masons. Ny Drafitra iray eran-tany dia manomana vondron-tafika miaramila any amin'ny firenena samihafa, izay ho mpianatr'i Satana, mifamatotra mivantana amin'izy ireo. Rehefa miverina aorian'ny fampitandremana ny herin'ny devoly dia hiseho ho toy ny fitondram-panjakana tokana izy ireo. Na izao aza dia efa eo ny toeran'ny polisy miaramila, miandry ny baiko. Tokony ho fantatrao izany.
Ho hitantsika ny famerenana ny zava-nitranga tamin'ny ady lehibe faharoa, fa tamin'ity indray mitoraka ity, miaraka amin'ny hetsika manerantany. Nanomboka tany Alemana i Hitler ary nandresy ny firenen-kafa. Ankehitriny, tsy manam-potoana intsony i Satana. Hanomboka ny ady niokleary iray izay ho manerantany izy - ny ady lehibe fahatelo - ny ady amin'ny olombelona rehetra. Hamono ny ampahatelon'ny zanak'olombelona amin'ity ady ity ny devoly, ary amin'ny alàlan'ny loza sy ny fanalan-jaza, dia toy ny ampahatelon'ny anjely nariana avy tany an-danitra. Balafomanga niokleary fito no avela hikapoka an'i Etazonia vokatry ny fahavetavetany. Balafomanga maro nokleary no hofafizin'ny Tanan'Andriamnitra satria nivavahan'ny Amerika i Chaplet ny famindrampon'Andriamanitra. Izany no nolazain'ny Ray Mandrakizay.
Ny mpaminany sandoka, ny Antikristy, dia hanandrana hanjaka an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny Governemanta tokana. Hangataka anao hanana marika (sombin-taratasy) ianao mba hividy sy hivarotra ary ireo izay tsy maka ny marika dia hazaina tahaka ilay SS nihaza ny Jiosy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Ireo vondrona sasany ao amin'ny tafika dia voafantina handray chip, izay midika fa hanana fiasa manokana sy manokana izy ireo amin'izay. Ny andraikitr'izy ireo dia ny mahita ilay kristiana mahatohitra mandà ny fiankinan-doha amin'ny olona mahafaty. Ireo tafika ireo dia tsy ho tarihan'ny jeneraly iray, fa andrianan'i Satana. Ireo voafandrika dia hampijalina ary maty maritiora, raha mandà ny tsy hanaiky ny jadona Antikristy sy ny governemanta tokana izao tontolo izao. Betsaka ny kristiana no terena hanaiky ny finoany eo imason'ny hafa sy ho faty maritiora; maro hafa no harovana amin'ny mpitsoa-ponenana. Saingy tadidio fa samy mitondra ny hazo fijaliany ny tsirairay, ary ity hazo fijaliana ity dia afaka ny ho fanomezana fahasoavana lehibe ho antsika, mpanampy famonjena, voafidy avy amin'ny Ray. Mila manoroka ny lakroa isika. Tsy misafidy ny hazo fijaliana isika fa manaiky ilay tonga eo amintsika. Io no fahatokisan'ny vahoakan'Andriamanitra.
Ny 15 aogositra 2018 dia nijoro teo akaikin'ny fidirana fiangonana aho, niarahaba ny olona izay tonga hankalaza ny fotoana mahafaly ny eveka nangalarin'ny Fraternity an'i St. Joseph Benedict Labre tamin'ny akanjo vaovao. Nanomana ny fankalazana miaraka amin'ireo mpikambana rehetra izahay satria ny fankatoavan'ny eveka ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny Fiangonana. Ny akanjo dia voalohany voarainay amin'ny filaminana. Notahin'ireo eveka ny akanjo, ary izy no nanome ahy ny voalohany. Ity ihany ny lanonana iray izay nandrenesako hoy ny Lady Lady hoe: "Antsoiko hoe apôstôly ny andro farany", satria napetrako ny eveka.
Rehefa niditra tao am-piangonana ny olona dia nahazo fahitana amin'ny ady ho avy aho. Ady niokleary izy io, nefa tsy azoko tamin'ny voalohany. Nahita faharavana be aho: afo sy baomba ary olona maro maty, ny sasany kosa efa maty. Ny faty rehetra hitako dia may, may ny laniny. Tena lehibe izany. Tsy ady kely fotsiny, omeko anao. Tena nanimba izy ity. Ary nanomboka nangataka vavaka momba izany aho na aiza na aiza. Ary fantatro fa avy amin'ny firenena roa ny ady: ny iray dia Korea ary ny iray kosa i Iran. Hiara-hiatrika ny Etazonia izy ireo.
Nahatsapa alahelo be aho noho izany ka nanomboka nitomany aho ary voatery niverina tany amin'ny sakramenta. Nisy fahitana roa hafa. Mahita ny nofon'ny olona mitete toy ny rano avy amin'ny vatany aho. Nahatsiravina tokoa izany, ka hoy aho: "Tompo ô, avelao mba hajanona ity. Tsy maintsy miaraka amin'ny oloko aho hitsena azy ireo am-pifaliana anio, ary izao vao mitomany aho izao. Tsy afaka aho . . . "
Nitady ahy ny eveka ary rehefa nahita ahy tao amin'ny sakramenta izy dia nanontany hoe: "Michel, inona no nitranga? '
“Nahazo fahitana avy amin'ny Ray aho.”
"Nahita ny ady aho."
"Oh!" dia lasa izy.
Niezaka nanisy fofonaina aho ary niverina tany am-piangonana hitsena olona. Izy ireo dia nahita ahy hafahafa satria mena ny tavako noho ny fitomaniana. I Luke, iray amin'ireo pretra ho amin'ny filaminana, dia teo ary natolony ahy ny namany efatra - ny tovovavy iray ary tovolahy telo. Rehefa nanenjika ny tanan'ireto zalahy ireto aho dia nentina avy hatrany tany amin'ny ady indray. Hitako fa novonoina izy telo lahy, ary niaraka tamin'izy ireo aho. Tamin'izay aho no nijery ahy sy nahatakatra fa ady niokleary izy io. Ny faty rehetra hitako dia may; may ny nofony. Ary fantatro fa avy amin'ny firenena roa ny ady. Ny iray dia i Korea ary ny iray kosa i Iran. Hiaraka hiatrika ny United States of America izy ireo.
Ilay bandy nampihorohoroiko dia nahita ny ady koa. Toa taitra be izy. Tena nalahelo be aho, ka niverin-doha ary niteny tamin'ireo lehilahy teo ireo hoe: "Rehefa manoratra anao ho any amin'ny tafika izy ireo, aza mankany. Ho faty ianao. Avia aty ary hiaro anao aho. ”
Namaly avy hatrany ny roa tamin'izy ireo hoe: "Eny, ho avy izahay." Ary ny tànako nikasika azy dia tany an-tany mangotraka. "Oh," hoy izy nibebaka, fa tsy namaly. Taty aoriana dia hoy izy tamiko: "Ho tonga koa aho, ry Dada."
Nilaza ihany koa ny Ray fa amin'ny alàlan'ny vavaka dia azo ahena ny ady fa tsy azo foanana. Ny ady dia tokony ho efa natomboka tamin'ny taona 2019, saingy nahemotra tamin'ny alàlan'ny vavaka, tamin'ny alàlan'ny Rosary. Zava-dehibe izany satria efa nohenoina ny vavaky ny olona. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2019, rehefa nandeha tany Etazonia aho mba hanao lahateny any amin'ny fiangonana fito any Michigan sy New York, marobe ireo olona tonga. Nivavaka taminay i Maria Virjiny hampitsahatra ny ady, ny ady nokleary ary nanoro hevitra azy ireo momba ny filohany aho.
Ary hoy aho taminy: Fantatrareo. Tsy olo-masina io filoham-pirenena io ”, ary nihomehy izy ireo. “Saingy tsy fantatry ny Governemanta Eran-tany izay tokony hatao aminy satria mandany tongotra iray izy. Ny ampitson'iny, mandihy amin'ny tongotra hafa izy. Tsy vitany ny mandanjalanja ny karazan-drafitra na fandaharam-potoana nomaniny. Tsy azony atao ny mifehy azy. Izany no antony maha-lehilahy azy ireo ity lehilahy ity.
Ny zavatra azoko ambara momba ny Filoha Trump dia izay fotsiny no nolazain'ny Ray tamiko. Ary hoy izy: Ity no nofidiko; Tsy azony atao ny mifehy azy. ” Tsy nilaza izy fa olo-masina. Tsy nilaza an'izany mihitsy izy. “Tsy afaka mifehy azy ireo izy ireo. Tsy fantatr'izy ireo hoe iza no tongotra nandihizany. ” Ity no nolazainy. "Noho izany dia tsy nahavita ny asany izy ireo." Nilaza ny Ray fa i Trump dia voafidy noho ny anjeliny izay nanova ny vato. Voafidy izy satria fantatry ny Tompo ny toetoetrany, ny fahaizany, ny zavatra nataony ary ny sitrapony. Nosafidiana ny hanakanana ny Fitondrana Iray Eran-tany. Zava-dehibe izany satria raha tsy teo izy dia afaka manome toky anao aho fa ny Fanjakana Iray Eran-tany, izay asan'i Satana no efa vita ankehitriny. Ary fantatro fa afaka miala sasatra amin'ny nolazaiko aho. Izany rehetra izany dia nolazaiko tamin'ny eveka.
Hoy tamin'ireo olona tany Etazonia aho: "Indraindray dia manao fihetsika amin'ny fomba tsy misy olona takatra ny Trump. Omeko toky anefa ianao, dia sambatra ny manana azy, ka tsy maintsy mivavaka ho azy ianao. Tsy maintsy mivavaka ho an'ny filoham-pirenena ianao ankehitriny satria hiatrika loza lehibe iray izy. Hiezaka hamono azy ireo izy ireo. ” Nandohalika izy ireo ary nivavaka niaraka tamin'ny rosary avokoa. Nisy andiana tamin'izy ireo nanolo-tena hivavaka ho an'ny Filoha isan'andro, ary tao anaty trano fiangonana iray aho vao haingana, dia hoy tamiko ny Tompo hoe: “Ry Michel, henoko ny vavaky ny oloko tany Etazonia. Tokony ho fanenjehana famonoana olona valo volana lasa izay. Tsy nanana fahombiazana izy ireo. Voaaro izy noho ny Rosary. ” Nahazo famantarana hafa aho taty aoriana. Ary ny Tompo indray dia nangataka ny hivavaka ho an'ity lehilahy ity satria hanandrana hamono azy indray izy ireo. ” Tokony hivavaka isika. Tokony hivavaka amin'ilay Rosia isika.
Hanohy ny lahatsoratra manaraka amin'ny "fisintomana virtoaly" miaraka amin'i Fr. Michel, kitiho eo Fizarana 13: ny fotoan'ny fitsidihana.
kitiho eto hanomboka amin'ny voalohany.
Posted in Demonia sy ny devoly, Fr. Michel Rodrigue, Ny fanazavana momba ny feon'ny fieritreretana, Ny vanim-potoana amin'ny Anti-Kristy, Ny fiverenan'ny herin'i Satana, Ny fotoan'ny fahoriana, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana, Ny Ady Lehibe III.
← FIZARANA 13: Fr. Michel Rodrigue…
FIZARANA 11: Fr. Michel Rodrigue… →